ကျောင်း လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ကောလိပ် လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ကျောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဝဲမြန်မာ, တက္ကသိုလ် လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း စနစ်မြန်မာ - ပါရမီရှင် ကျောင်းစီမံခန့်ခွဲမှု
ပါရမီရှင် ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သည်ဝက်ဘ်နှင့်မိုဘိုင်း လျှောက်လွှာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောင်း / ကောလိပ်နှင့်တက္ကသိုလ်များ၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုအထူးစီမံနိုင်ရန်အထူးတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် တိမ် အခြေခံကျောင်း လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ဖြေရှင်းချက် ဖြစ်ပြီးမည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို လော့ဂ်အင် ကိုအသုံးပြုရန်သူတို့ကိုကူညီရန်ဆရာများ၊ ကျောင်းသားများနှင့်မိဘများထံနောက်ဆုံးပေါ်မိုဘိုင်းလျှောက်လွှာကိုပေးလိမ့်မည်။ ဤအချက်များတစ်လျှောက်ဤစနစ်ကိုအသုံးချရန်ရွေ့လျားမှုသည်အလွန်များပြားလာသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားရှေ့နောက်နှင့် backend အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးများအတွက်ကွန်ပျူတာပါဝင်မှုတစ်ခုလုံးကိုရရှိစေရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျောင်းများ၊ ကောလိပ်များနှင့်တက္ကသိုလ်များသည်မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသောအခြေခံအုတ်မြစ်များ၏သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုလေ့ကျင့်ခန်းများဖြစ်သည်။
ကျောင်း / ကောလိပ် / တက္ကသိုလ် (လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း) စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
"ပလက်ဖောင်း အင်္ဂါရပ်များ နှင့်ရိုးရှင်းသော်လည်း၊ တက်ကြွသော .ရာဝတီ များဖြင့်အခက်အခဲကင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုခံစားကြည့်ပါ"
ပညာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ကျောင်းသားစီမံခန့်ခွဲမှု သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး / စာကြည့်တိုက် / ဘော်ဒါဆောင် စာမေးပွဲစီမံခန့်ခွဲမှု လစာနှင့်ဘဏ္စီမံခန့်ခွဲမှုာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု
စီး / ဌာနများ
ကျောင်းသားများသည်သူတို့လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာစီး / ဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဖြစ်ပျက်မှုအပြောင်းအလဲများနှင့်မွမ်းမံမှုများနှင့် ပတ်သတ်၍၊
ကျောင်းသားများသည် ၄ င်းတို့၏သုတ်သင်ချက်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလွယ်ကူစွာရရှိနိုင်ပြီးစနစ်မှတဆင့်သူတို့၏အားထုတ်မှုကိုလျှော့ချပြီးကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးလာသည်။
လာမည့်ဖြစ်ရပ်များ / လုပ်ဆောင်ချက်များ / အရေးကြီးသောအရာများကိုကျောင်းအာဏာပိုင်များမှထုတ်ဝေသောမြို့ပတ်ရထားမှတစ်ဆင့်ကျောင်းသားများနှင့်မိဘများကသိရှိနိုင်ပြီး၊
ကွဲပြားခြားနားသောလက်မှတ်အမျိုးအစားများကိုပုံဆွဲခြင်း / ရာထူးရရှိခြင်း၊ အားကစားပြိုင်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်းစသည်တို့ကိုဆရာများကထုတ်ပေးနိုင်သည်။
ကျောင်းသားများသည်ဆရာများကသက်ဆိုင်ရာအတန်းများသို့ပေးသောတာ ၀ န်များနှင့်မှတ်စုများကိုကြည့်နိုင်သည်။ ကျောင်းမှရရှိသောတာ ၀ န် / မှတ်စုများအတွက်ကျောင်းသားများနှင့်မိဘများသည်၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းလျှောက်လွှာအကြောင်းအသိပေးချက်ရရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပညာသင်ဆုအပိုင်း သည်ကျောင်းသားများအား ၄ င်းတို့၏အခကြေးငွေများသို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက်၎င်းတို့၏ထောက်ပံ့မှုပေးသည့်လုပ်ငန်းကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ရန်ကျောင်းသားများကိုပေးသောပညာသင်ဆုများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုပြသသည်။
ကျောင်းသားများသည်ဆရာများကသက်ဆိုင်ရာအတန်းများသို့ပေးသောအတန်းနှင့်အိမ်စာကိုရှုမြင်နိုင်သည်။ ကျောင်းမှလက်ခံရရှိသည့်အတန်း / အိမ်စာအတွက်၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းလျှောက်လွှာအကြောင်းကျောင်းသားများနှင့်မိဘများမှအကြောင်းကြားစာရရှိသည်။
အွန်လိုင်းဝန်ခံချက် / ။ ည့်သည် ည့်သည်ကျောင်းသား
ကျောင်းသားများကိုလျှောက်ထားရန်လွယ်ကူစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ င်ခွင့်စာမေးပွဲစနစ်မှတဆင့် ၀ င်ခွင့်ကိုစီမံနိုင်သည်။
ဆရာများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ဖြင့်ကျောင်းသားများနေ့စဉ် / အပတ်စဉ်ပုံမှန်မွမ်းမံခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သောဘာသာရပ်၊ အစားအစာနှင့်စာမေးပွဲအချိန်ဇယားအရပြုလုပ်မှု၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းတို့ကိုအလွယ်တကူစီမံနိုင်သည်။
တာဝန် ဆရာများ၊ ကျောင်းအုပ်များနှင့် / သို့မဟုတ်အခြားအာဏာပိုင်များမှကျောင်းသားများအားကျောင်းသားများကိုချထားပေးနိုင်သည်။
ကျောင်းများ၊ ကောလိပ်များ၊ ပွဲတော်များ၊ အားကစားနေ့များ၊ ပုံဆွဲပြိုင်ခြင်းစသည့်ကျောင်းများ၊ ကောလိပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောမတူညီသောဖြစ်ရပ်များကိုကျောင်းသားများအားဤသင်ခန်းစာမှတစ်ဆင့်မွမ်းမံခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
စစ်သုံးအိုးခွက်စီမံခန့်ခွဲမှုကကျောင်းသားများအပတ်စဉ်အစားအစာအစီအစဉ်နှင့် ပတ်သတ်၍ နောက်ဆုံးသတင်းများကိုဖော်ပြပြီးအစားအစာစာရင်းမှတ်တမ်းများနှင့်စားသုံးသောအစားအစာအရေအတွက်ကိုပင်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဆရာများ၊ မိဘများ၊ ကျောင်းအုပ်သည်ကျောင်းသား၏ကဒ်ပြားကိုမြင်နိုင်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်အစီရင်ခံစာများကိုအာဏာပိုင်များမှပညာရှင်များ / ကဏ္ အပိုင်း ပညာရှင်များမှထုတ်ယူနိုင်သည်။ မိဘများနှင့်ဆရာများသည်ကျောင်းသားများ / ကလေးများအားခြေရာခံရန်ထိုက်တန်သည်။
ကျောင်းအုပ်နှင့်ဆရာများ၊ ဆရာများ၊ ဆရာများနှင့်ကျောင်းသားများအကြားနေ့စဉ်အရေးကြီးသောစကားပြောဆိုမှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ဆော့ဝဲလ်ရှိဤစက်ရုံရှိလေးစားသောပါတီများသို့အသိပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဂျူးမော်တော်ယာဉ်အရေအတွက်၊ ထိုင်ခုံအများဆုံးနေရာချထားမှု၊ အာမခံသက်တမ်းတိုးသည့်နေ့နှင့်ယာဉ်မောင်း၏ဆက်သွယ်ရန်နံပါတ်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ module ပြသမှုareaရိယာ သည်သတ်မှတ်ထားသောလမ်းကြောင်းအသေးစိတ်နှင့်ယာဉ်မောင်း၏အမည်ကိုမှန်ကန်စွာဖော်ပြထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသည်ကျောင်းသားများနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏ကောက်ယူခြင်းနှင့်စက်ရုံမှပစ်ခြင်းကိုစီမံသည် အခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံအသေးစိတ်လည်း။
ဘော်ဒါဆောင်အမျိုးအစားစာရင်း၊ ကျောင်းသားအသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ ဘော်ဒါဆောင်တွင်မနေထိုင်သောကျောင်းသားများ၊ အခကြေးငွေများတည်ဆောက်ပုံ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ module ကြည့်ရှုခြင်း, ဘဏ်ဘဏ် တင်ပါ နှင့် ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ module သည်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအွန်လိုင်းစာမေးပွဲကို Generate ပြုလုပ်ပြီးကျောင်းသားများကိုချက်ချင်းရလဒ်ပေးသည်။
အဆင့် / အဆင့်အဆင့်သတ်မှတ်ပါ
တစ် ဦး ချင်းစီအတန်း၏အဆင့်အတန်းကိုသတ်မှတ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ module သည် ၀ န်ထမ်းများစာရင်း၊ သတ်မှတ်ထားသောနေရာ၊ လစာခေါင်း၊ ပမာဏနှင့်အမျိုးအစားကိုပြသည်။
ပေးဆောင် ဦး ခေါင်း
ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားအမည်များ၏ entries တွေကိုပြပါ။
ပေးဆောင် ကိုဖြတ်ပိုင်း Generate
ကျွန်ုပ်တို့၏ module သည်လစာစာရွက်ကိုထုတ်ပေးပြီးလစဉ်နှင့်နှစ်ပတ်လည် ၀ န်ထမ်းများ၏ပညာရှိအစီရင်ခံစာကိုစီမံခန့်ခွဲသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ module သည်ဘဏ် / ငွေပေးငွေယူ၊ စရိတ်နှင့်အထွေထွေဘောက်ချာကိုစီမံသည်။
ကျောင်းအခကြေးငွေများ၊ ကျောင်းလခလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများနှင့်အခကြေးငွေမှတ်ပုံတင်မွမ်းမံခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ module ၏အကူအညီဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ module သည်ဂျာနယ်၊ ငွေ၊ ဘဏ်စာအုပ်၊ အထွေထွေစာရင်း၊ စမ်းသပ်မှုလက်ကျန်ငွေ၊ လက်ကျန်ငွေစာရင်း၊ အမြတ်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုစသည်တို့ကိုစီမံသည်။
စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များကိုစီမံခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေခြင်း၊ အလုပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အဖွဲ့လိုက်စီစဉ်ခြင်းစသည့်လုပ်ဆောင်မှုများစာရင်းကို HR မှစီမံနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်ကိုစီမံနိုင်သည် အကောင့်မာစတာ, အသုံးစရိတ်မာစတာ, ဘဏ် / ငွေမာစတာ,အခွန် သခင်..စသည်တို့.
ဥပမာ ပါရမီရှင် ကျောင်း လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း တွင်စီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်ကိုင်တွယ်ရန်ကွဲပြားခြားနားသော module များရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှု၊ စာကြည့်တိုက်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ကျောင်းပြက္ခဒိန်၊ ပွဲများစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၀ န်ထမ်းများ၏လစာနှင့်လစာကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်ပြည့်စုံသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် module နှင့်အတူဗားရှင်းအသစ်ကိုမကြာသေးမီကဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဘဏ္moduleာရေး module သည်သင့်အားကျောင်းသားများအတွက်အခကြေးငွေပေးသည့်အဆောက်အအုံများကိုစီစဉ်ရန်နှင့်သတ်မှတ်ရန်ကူညီသည်။ ပါရမီရှင် ကျောင်း လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း စနစ် သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများ၊ ဆရာများနှင့်မိဘများအချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက် ပါရမီရှင် အတွင်း၌စာတိုပို့စနစ်စနစ်လည်းရှိသည်။
တိမ် အခြေပြု လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ၊ ကျောင်း လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ဖြေရှင်းချက် Myanmar၊ ပညာရေး လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း Modules မြန်မာ၊ ကျောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ၊ ကျောင်း လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း စနစ်မြန်မာ၊ ကျောင်း လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ၊ အသေးစားစီးပွားရေးအတွက်ထိပ်တန်း လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း စနစ်များ၊ ကောလိပ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆော့ဝဲမြန်မာ၊ ဆော့ဖ်ဝဲကိုသရုပ်ပြသည်
ကျောင်းပညာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုမြန်မာနိုင်ငံ | ကောလိပ် | အင်စတီကျု | တက္ကသိုလ်
ပါရမီရှင် ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သည်ကျောင်းသားများကိုပညာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်ကူညီပေးပါမည်။ လုပ်ငန်းခွင်လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့်လိုချင်သောရလဒ်များကိုရရှိနိုင်မည်။ ၎င်းသည်ကျောင်းသားများသာမကကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသင်ယူမှုယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ ဘယ်သူတို့ရဲ့ပိုမိုနီးကပ်စွာသူတို့ရဲ့သတ်မှတ်ထားရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သူတို့ကိုဆောင်ခဲ့ ဦး မည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းကိုပုံစံရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီးပညာရေးဖြစ်စဉ်၏ချောမွေ့ပြီးအကျိုးရှိစွာစီးဆင်းမှု၏အကူအညီဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီးပညာရေးဖွဲ့စည်းပုံကိုမျှော်လင့်ထားသည့်ဒစ်ဂျစ်တယ်မူဘောင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးလိမ့်မည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းသည်ကျောင်းသားများ၏ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကိုဖန်တီးရာတွင်အထောက်အကူပြုမည့်ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ပညာရေးဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များနှင့်ကိရိယာများနှင့်အပြည့်အဝပေါင်းစပ်ထားသည်။
ကျောင်းပညာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် Software များ မြန်မာ, ပညာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဆော့ဝဲ များ မြန်မာ, ပညာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုမိုဘိုင်းလျှောက်လွှာမြန်မာ, ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ERP မြန်မာ, မြန်မာနိုင်ငံရှိကျောင်းသားများအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, ပညာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု iPhone မြန်မာ အတွက်အက်ပလီကေးရှင်း, မြန်မာနိုင်ငံရှိကျောင်းကောလိပ်အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
ကျောင်းကျောင်းသား / သူမ်ားစီမံခန့်ခွဲမှု မြန်မာ | ကောလိပ် | အင်စတီကျု | တက္ကသိုလ်
ကျောင်းသားစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း သည်ကျောင်းသားများ၏ကြီးမားသောအချက်အလက်များကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပြီးသိုလှောင်ထားသည့်အချက်အလက်အားလုံးကိုစနစ်မှထိရောက်စွာပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ ကျောင်းသား၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ခြုံငုံရှုမြင်နိုင်ရန်၎င်းသည်ကျောင်းအပ်ခြင်း၊ ၀ င်ခွင့်၊ အတန်းနှင့်ခွဲတမ်းခွဲဝေခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစီမံနိုင်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်၎င်းသည်ဆရာ၏နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုများကိုစောင့်ကြည့်ပြီးကျောင်းသား / ဆရာများ၏နေ့စဉ်တက်ရောက်မှုကိုလည်းခြေရာခံနိုင်သည်။ ကျောင်းသားများသည်ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ကျောင်းသားများအတွက်လွယ်ကူသော အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင် နှင့်အတူသူတို့၏နေ့စဉ်ပညာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများဖြင့်မျိုးဆက်သစ်နည်းပညာများအကြောင်းလေ့လာနိုင်သည်။
ကျောင်းသားစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မြန်မာ၊ အွန်လိုင်းကျောင်းသားစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆော့ဝဲ လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ၊ ကျောင်းသားစီမံခန့်ခွဲမှုမိုဘိုင်းလျှောက်လွှာမြန်မာ၊ အိုင်ဖုန်းနှင့်အန်းဒရွိုက်မြန်မာအတွက်ကျောင်းသားစီမံခန့်ခွဲမှုအက်ပလီကေးရှင်း၊ ကျောင်းသားသတင်းအချက်အလက်စနစ်ဆော့ဝဲ လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ၊ ကျောင်းသားသတင်းအချက်အလက်စနစ်အွန်လိုင်း၊ မြန်မာ
ကျောင်းပညာသင်ဆုအစီအစဉ်မြန်မာ ကောလိပ် | အင်စတီကျု | တက္ကသိုလ်
စာရွက်စာတမ်းများမရှိဘဲအွန်လိုင်းပညာသင်ဆုအစီအစဉ်သည်ကျောင်းသားများကိုလျှောက်လွှာကိုဒီဂျစ်တယ်လျှောက်လွှာတင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အသုံးပြုနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုတိုးပွားစေပြီးအမှားများ၏အခွင့်အလမ်းများကိုလျော့ကျစေပြီးကျောင်းပညာရေး လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း တွင်ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာ၏ထိရောက်သောလုပ်ငန်းစဉ်စီးဆင်းမှုကိုသေချာစေသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးသည်ကျောင်းသားများ၏ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်များကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျောင်းသားများအားပညာရေးပြီးဆုံးရန်အတွက်ငွေကြေးအထောက်အပံ့ဖြစ်စေမည်။ အဆိုပါ module ကိုကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးလိမ့်မည် ကျောင်းသားများကိုအွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကျောင်းသားများအားထူးခြားသောမှတ်ပုံတင်နံပါတ်ချထားပေးခြင်း၊ ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာတင်သွင်းခြင်းအတွက်လျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်၊ ရွေးချယ်ထားသောကျောင်းသားများအတွက်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည့်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ထုတ်ဝေခြင်း၊ ကျောင်းသားများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများမှရရှိသောပညာသင်ဆုပမာဏကိုအတည်ပြုခြင်း၊ ကျောင်းသား / မိဘများထံသို့ SMS သတိပေးချက် ခွင့်ပြုငွေနှင့်ပမာဏပေးချေခြင်း၊ လျှောက်လွှာမျိုးစုံကိုင်တွယ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်းစာရင်းမျိုးဆက်၊ ဆု၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
အွန်လိုင်းပညာသင်ဆုအစီအစဉ်မြန်မာ, ပညာသင်ဆုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဆော့ဝဲ မြန်မာ, ကျောင်းသားပညာသင်ဆုစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ , ပညာသင်ဆုစီမံခန့်ခွဲမှုမိုဘိုင်း မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် App, iPhone နှင့် Android မြန်မာ အတွက်ကျောင်းသားပညာသင်ဆုစီမံခန့်ခွဲမှုလျှောက်လွှာ, ကျောင်းသားပညာသင်ဆုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဆော့ဝဲ များ မြန်မာ, မြန်မာနိုင်ငံရှိကျောင်းသားများအတွက်ပညာသင်ဆုအစီအစဉ်များ
ကျောင်းမှအခမဲ့အွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့်နှင့်ကျောင်းအပ်ခြင်းမြန်မာနိုင်ငံ ကောလိပ် | အင်စတီကျု | တက္ကသိုလ်
ကျောင်း ၀ င်ခွင့်နှင့်ကျောင်းအပ်နှံခြင်းသည်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု (ကျောင်း၊ ကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ်၊ အင်စတီကျူးရှင်းစသည်) အတွက်ပုံမှန်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းတွင်လုပ်ရလွယ်ကူပြီးရှုပ်ထွေးသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါ ၀ င်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်ပုံစံများကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း၊ အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်း၊ ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အချိန်များပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်အရည်အသွေးနှင့်အမှားအယွင်းများဖြစ်ပေါ်စေခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ developer များအနေဖြင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုချောမွေ့လွယ်ကူစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရည်ရွယ်၍ အွန်လိုင်းဝန်ခံချက်နှင့်ကျောင်းအပ်အင်္ဂါရပ် ကိုတီထွင်သူများတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ဤအရာသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းများကိုသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်အနာဂတ်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကိုမြန်ဆန်စွာပြုလုပ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် Digital အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာစနစ် သည်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကျောင်းသားများအတွက်လုပ်ငန်းကိုလွယ်ကူစေသည်။
၎င်းသည်အွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့်ပုံစံဖြစ်သောကြောင့်လျှောက်ထားသူများကို Anywhere နှင့် Anytime တို့မှလျှောက်လွှာကိုခွင့်ပြုသည်။
အွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့်လျှောက်လွှာသည်မလိုလားအပ်သောအချက်အလက်များကိုလျှော့ချရန်ကူညီလိမ့်မည်၊ အက်မင်သည်လျှောက်လွှာများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်၊ အရည်အချင်းပြည့်မှီသောကျောင်းသား၏အချက်အလက်များကိုသာအင်စတီကျု၏ဒေတာဘေ့စ်ထဲထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
လူသားစွမ်းအား သိမ်းဆည်း - အင်စတီကျူးရှင်းများသည်လျှောက်ထားသူများအားစီမံခန့်ခွဲရန်အတွက်နောက်ထပ်လုပ်သားအင်အားမလိုအပ်ပါ။
ကျောင်း ၀ င်ခွင့်စီမံမှုစနစ်မြန်မာ၊ ကျောင်းသားအွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံမြန်မာ၊ ကျောင်းသား ၀ င်ခွင့်စီမံမှုစနစ်မြန်မာ၊ အွန်လိုင်းကောလိပ် ၀ င်ခွင့်စနစ်မြန်မာ၊ ကျောင်း ၀ င်ခွင့်မိုဘိုင်း App မြန်မာ၊
ကျောင်းအခမဲ့ အွန်လိုင်း အခကြေးငွေများစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဆော့ဝဲလ်မြန်မာ ကောလိပ် | အင်စတီကျု | တက္ကသိုလ်
ပါရမီရှင် ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲသော ကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဝဲ သည်ကျောင်းများ / ကောလိပ်များ / တက္ကသိုလ်များအားကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောကွဲပြားသောငွေပေးချေမှုရသည့်တံခါးများမှကျောင်းသားများထံမှအခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းကိုဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့်ကူညီပေးသည်။ အွန်လိုင်းအခကြေးငွေကောက်ခံမှုကိုသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှအချိန်မရွေး၊
မိဘ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ၀ န်ထမ်းတိုင်းအားလုံခြုံစိတ်ချရသော logins များကိုပေးထားသည်။ ၎င်းမှတစ်ဆင့်အွန်လိုင်းအခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်း / ကောက်ယူစုဆောင်းမှုသည်လုံခြုံစွာဖြစ်ပျက်လာပြီးလိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုအန္တရာယ်လျော့နည်းသွားသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ကျောင်းကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် သည်လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးကိုလွယ်ကူစေသည်။ စုဆောင်းထားသောအခကြေးငွေများနှင့်စောင့်ဆိုင်းနေရသောအခကြေးငွေများနှင့် ပတ်သက်၍ အချိန်နှင့်တပြေးညီခြေရာခံနိုင်သည်။
သင်တန်း - ပညာရှိအတန်းပညာနှင့်ကျောင်းသားအမျိုးအစားပညာကြေးအခကြေးငွေစုဆောင်းခြင်း
ပုံသေသတ်မှတ်ထားသောအခကြေးငွေလက်ခံခြင်း / ငွေပေးချေခြင်းပုံစံများကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ .ရာဝတီ တွင်ရရှိနိုင်သည်
စာတို / အီးမေးလ် မှတဆင့်ဆိုင်းငံ့အခကြေးငွေ၏အခြေအနေအစီရင်ခံစာများ
အွန်လိုင်းအခကြေးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း Myanmar၊ အွန်လိုင်းအခကြေးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း၊ ကျောင်းသားများ၏အွန်လိုင်းအခကြေးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ၊ အွန်လိုင်းကောလိပ်ကျောင်းများမှပေးသော အွန်လိုင်း ပေးဆောင်၊ တက္ကသိုလ်မှ အွန်လိုင်း ဝန်ဆောင်ခပေးချေမှု၊ အွန်လိုင်းကြေးပေးဆောင်မှု လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ၊ မြန်မာနိုင်ငံကောလိပ်ကောလိပ်တွင်အွန်လိုင်းအခကြေးငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းစဉ်
ကျောင်းအွန်လိုင်းတက်ရောက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဝဲလ်မြန်မာ ကောလိပ် | အင်စတီကျု | တက္ကသိုလ်
ပါရမီရှင် ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မှပေးသောတက်ရောက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အချိန်များစွာချွေတာပြီးနေ့စဉ်လက်စွဲစာအုပ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်သွားလျှင်သတ်ပစ်မည့်ဆရာများ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့်ဆရာများအားဖြင့်ကျောင်းသားများအွန်လိုင်းတက်ရောက်ခြင်းကိုကူညီရန်ကူညီသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့ကျောင်းသားတက်ရောက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို အသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပြီးဘောပင်နှင့်စက္ကူများကိုနုတ်ဆက်ပါတယ်ဟုပြောနိုင်ပါပြီ
ဤနည်းအားဖြင့်အခမဲ့တက်ရောက်မှုဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ဆရာများအားမတူညီသောအတန်းများ၊ အခန်းကဏ္ ကဏ္.များ များနှင့်ဌာနများအတွက်တက်ရောက်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ကူညီသည်။ တက်ရောက်သူအချက်အလက်များကိုနေ့စဉ်အရံသိမ်းဆည်းခြင်းကို အွန်လိုင်း တက်ရောက်မှုဆော့ (ဖ်) ဝဲမှထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးစိတ်ကြိုက်အစီရင်ခံစာများကိုလည်းစနစ်မှထုတ်ယူနိုင်သည်။
ကျောင်း ၀ န်ထမ်းတက်ရောက်သူ
၀ န်ထမ်းများ၏နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်နှင့်နှစ်စဉ်တက်ရောက်မှုများကို admin မှရယူနိုင်သည်။
မည်သည့်ပုံသေ / အမှားဖြစ်ပါစေအုပ်ချုပ်သူသည်ဆရာ၏ကျောင်းခေါ်ချိန်ကိုကြီးကြပ်နိုင်သည်။ ကျောင်းသားတက်ရောက်မှု
ကျောင်းသားများ၏နေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်၊ လစဉ်နှင့်နှစ်စဉ်တက်ရောက်မှုများကိုသက်ဆိုင်ရာအတန်းဆရာများမှယူနိုင်သည်။
မည်သည့် မူလက / အမှား၏အမှု၌ဆရာရဲ့ဖွင့်နောက်ပိုင်းအဆင့်တွင်ခေါ်ဆောင်သွားကျောင်းသားရဲ့တက်ရောက်သူကိုပြုပြင်နိုင်သည်။ ဇီဝမက်ထရစ်ပေါင်းစည်းမှု
တက်ရောက်သူနှင့်သက်ဆိုင်သောအလိုအလျှောက်ဒေတာများကို Bio-metric နှင့် RFID ထုတ်ကုန်များပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့်ကောက်ယူပါသည်။
အချိန်နှင့်တပြေးညီလှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်သောကြောင့် proxy နှင့် ပုံမှန်ဒေတာ ဝင်ခွင့်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
အွန်လိုင်း တက်ရောက်သူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဆော့ဝဲ များ, ကျောင်းသားတက်ရောက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဆော့ဝဲ များ မြန်မာ, ကျောင်းသားတက်ရောက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ, အွန်လိုင်းတက်ရောက်မှုခြေရာခံခြင်း စနစ် ဆော့ဝဲ မြန်မာ , ကျောင်းသားအတန်းတက်ရောက်ခြင်း ကိုခြေရာခံ ဆော့ဝဲ ကိုမြန်မာ , မြန်မာနိုင်ငံရှိကျောင်းကောလိပ်ကျောင်းသားများအတွက်တက်ရောက်နိုင်သည့် Tracker မိုဘိုင်း App, ကျောင်းသားတက်ရောက်မှုမှတ်ပုံတင်ခြင်းအွန်လိုင်းအွန်လိုင်း, ဇီဝဗေဒ တက်ရောက်သူစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဆော့ဝဲ လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ, မြန်မာနိုင်ငံကောလိပ်တက္ကသိုလ်အတွက်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း
အိမ်စာနှင့်အတန်းတွင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဆော့ဝဲလ်မြန်မာ ကောလိပ် | အင်စတီကျု | တက္ကသိုလ်
ပါရမီရှင် ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ဤအင်္ဂါရပ်မှတဆင့်; ကျောင်းသားတစ် ဦး ၏နေ့စဉ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုခြေရာခံနိုင်ရန်အတွက်ကျောင်းသားများအနေဖြင့်အောင်မြင်မှုအတွက်ပိုမိုနီးကပ်သောခြေလှမ်းတစ်ခုရရှိစေရန်မှန်ကန်သောပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးရန်အလွယ်တကူကူညီနိုင်သည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆရာများအနေဖြင့်အရာအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ကျောင်းသား၏အိမ်စာ၊ စာသင်ခန်း၊ တာ ၀ န်၊ မှတ်စုများ၊ သင်ခန်းစာစီစဉ်ခြင်းစသည်တို့ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့၏တာ ၀ န်ကိုလျှော့ချရန်ဆရာများအားကူညီပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြန်အလှန်အကျိုးပြု ဝဘ်အခြေစိုက် လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း module သည်ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏ပညာရေးဆိုင်ရာအသွင်အပြင်များအားလုံးနှင့်ကျောင်းသားများ၏ရလဒ်အပေါ်အဓိကထားသောအမျိုးမျိုးသောသင်ယူမှုနှင့်သင်ကြားရေးကိရိယာများနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းကျောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မှပေးသောမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းသည်မိဘများက ၄ င်းတို့ကလေးများသည်လုပ်ငန်းတစ်ခုစီကိုအချိန်မီပြီးမြောက်အောင်အချိန်မီခြေရာခံရန်ကူညီပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကျောင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောပါတီအားလုံးကိုအောက်ပါပညာရေးဆိုင်ရာထူးခြားချက်များနှင့်ကူညီပေးရန်အပြည့်အဝကျောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ရှိသည်။
ဆရာများသည်ကျောင်းသားများအားသင်ကြားရန်တာ ၀ န်ပေးသောအတန်းများနှင့်ကဏ္theများစာရင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အတန်းနံပါတ်နှင့်ကျောင်းအုပ်သို့မဟုတ်ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှခွဲဝေပေးသည့်အပိုင်းကိုတွေ့နိုင်သည်။
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည်အတန်းအစားအမည်၊ ကုဒ်နံပါတ်နှင့်စီး / ဌာနတို့ဖြင့်လူတန်းစားအသစ်ကိုထပ်ထည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်ကျောင်းသား၏အားသာချက်ကိုလည်းပြသလိမ့်မည်။
ထို့အပြင်သူ / သူမသည်အပိုင်းတစ်ခုစီတွင်သင်ကြားနေသောကျောင်းသားစုစုပေါင်းနှင့်အတူသီးခြားအတန်းအတွက်ကွဲပြားသောအခန်းကဏ္ ထည့်ပါ များကိုထည့်နိုင်သည်။ သူတို့သည်ကျောင်းသားများ၏အတန်းများနှင့်ကဏ္theများစာရင်းကိုလည်းကြည့်ရှု။ မွမ်းမံနိုင်သည်။
ကျောင်းသားများသည်ဘာသာရပ်ခွဲတမ်းစာရင်းမှကျောင်းသားများကိုသင်ကြားရန်ခွဲဝေထားသည့်ဘာသာရပ်များကိုတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဆရာ / မမ်ားကို စီး / ဌာန နှင့်သင်ကြားမည့်ဘာသာရပ်များကိုမတူညီသောအတန်းများနှင့်ကဏ္inများတွင်သင်ကြားရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းအတွက်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကုဒ်ထည့်နိုင်သည်။ အစိုးရဘုတ်အဖွဲ့၏စည်းမျဉ်းများအရသူဖတ်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်သောစာအုပ်နှင့်စာအုပ်၏ရေးသားသူကိုထပ်တူထပ်မံထည့်သွင်းနိုင်သည်။ မတူကွဲပြားသောဘာသာရပ်များအတွက် admin မှဘာသာရပ်ကုဒ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ - ဓာ၊ ရူပဗေဒ - PHY၊ အနုပညာ - FIAR စသည်။
အကယ်၍ အဖွဲ့အစည်းသည်ဘာသာရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောဘာသာရပ်များ (သို့) အတန်းအားလုံးတွင်ထပ်မံထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်သည်ဆိုပါကစီမံအုပ်ချုပ်သူသည်သီးခြားအတန်းနှင့်ကဏ္forများအတွက်ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထိုနည်းတူစွာပင်သူ / သူမမတူညီသောဘာသာရပ်များကိုဆရာများအားခွဲဝေချထားပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်တန်းများ / ဌာန၊ ၀ န်ထမ်းအမည်၊ အတန်းနှင့်အပိုင်းတို့တွင်သင်ကြားမှုတွင်မည်သည့်ဘာသာရပ်များသင်ကြားရန်လိုအပ်သည်ကိုနားလည်ရန်သူတို့ကိုကူညီလိမ့်မည်။
ဆရာ / မများသည်ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုး၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များ၏သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုအချိန်မီပြီးစီးရန်အတန်းနှင့်ပို့ချချက်များကိုစီစဉ်ရန်သူတို့ကိုကူညီလိမ့်မည်။
နေ့စဉ်စီမံခန့်ခွဲသူသည်သင်ခန်းစာသစ်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းစာရင်းကိုထည့်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဆရာများအားဘာသာရပ်များ၊ ဟောပြောပို့ချချက်ကုဒ်များနှင့် ၄ င်းတို့ခွဲဝေထားသည့်ကွဲပြားသောဟောပြောပို့ချခြင်းခေါင်းစဉ်များသိရှိရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
ကျောင်းသားများသည်၎င်းတို့၏နေ့စဉ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတန်းမှတ်စုများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ၄ င်းတို့ကိုသက်ဆိုင်ရာအတန်းဆရာများက၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများဖြင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သောမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကို အသုံးပြု၍ တင်မည်။
Desktop ဝက်ဘ်စနစ်အပြင် Mobile App မှကြည့်ရှုနိုင်သောစနစ်တွင်ဆရာများသည် တာဝန်နှင့်မှတ်စုများ များကိုပုံမှန်တင်ပါလိမ့်မည်။ ကျောင်းသားများကတာ ၀ န်နှင့်မှတ်စုများခွဲဝေပေးသောအတန်းဆရာ၏နာမည်နှင့်အတူတူတင်သွင်းသည့်ရက်ကိုကြည့်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သောမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းသည်ကျောင်းသားများအတွက်နေ့စဉ်အတန်းများ / အိမ်စာများကိုတင်ရန်ဆရာများကိုကူညီလိမ့်မည်။ ကျောင်းသားများနှင့်မိဘများသည် မိုဘိုင်း App မှတစ်ဆင့်ဘာသာရပ်တိုင်းအတွက်သတ်မှတ်ထားသောအတန်း / အိမ်စာကိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။
၎င်းသည်ဖျားနာခွင့်သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်များမရှိသောကျောင်းသားများအားကူညီလိမ့်မည်။ သူတို့ကသူတို့၏အတန်းအလုပ်များကိုမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းမှတဆင့်ကူးယူပြီးဖြည့်နိုင်သည်။ ၄ င်းတို့သည်သက်ဆိုင်ရာဆရာများကတစ်နေ့တာ၏အလုပ်နှင့်အိမ်စာကိုကျောင်းသားများအားအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။
ကျောင်းကောလိပ်တက္ကသိုလ်အိမ်စာနှင့် စာသင်ခန်း စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် မြန်မာ, အိမ်စာနှင့် စာသင်ခန်း စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆော့ဝဲ လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ , ကျောင်းသားအိမ်စာနှင့်စာသင်ခန်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆော့ဝဲ မြန်မာ, ကျောင်းသားအိမ်စာနှင့်စာသင်ခန်းစီမံခန့်ခွဲမှု မိုဘိုင်း App မြန်မာ , ကျောင်းသားအိမ်စာနှင့်အတန်းအစားစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ, အိုင်ဖုန်း မြန်မာ အတွက်ကျောင်းသားအိမ်စာနှင့် စာသင်ခန်း စီမံခန့်ခွဲမှုအက်ပလီကေးရှင်း, Android မြန်မာ အတွက်ကျောင်းသားအိမ်စာနှင့် Classwork စီမံခန့်ခွဲမှုအက်ပလီကေးရှင်း
ကျောင်းအွန်လိုင်းကျောင်းအချိန်ဇယားစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မြန်မာ ကောလိပ် | အင်စတီကျု | တက္ကသိုလ်
အချိန်ဇယားဆွဲခြင်း ဇယားသည် ပါရမီရှင် ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု နှင့်ရိုးရှင်းပြီးထိရောက်စေသည်။ ၎င်းသည်ကျောင်း / ကောလိပ် / တက္ကသိုလ်အမျိုးမျိုးရှိကျောင်းသားများအားစီစဉ်ခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းအတွက်အခြေခံအကျဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျောင်းသားများကိုသင်ကြားရန်ဘာသာရပ်တစ်ခုစီ၏အချိန်အတိအကျကိုခွဲဝေရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။ ကျောင်းတွင်အတန်းချိန်များမှာအကန့်အသတ်ရှိသဖြင့်သင့်တော်သောအချိန်စီစဉ်ခြင်းနှင့်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ဖြင့်စီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အတန်းသစ်ကိုသတ်မှတ်ရန်သို့မဟုတ်အတန်းချိန်ကိုပယ်ဖျက်ရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့မှသာကျောင်းသားများ၏အချိန်နှင့်စွမ်းအင်ကိုသက်သာစေနိုင်သည်။ အချိန်အားလုံးကိစ္စများတွင်အမျိုးမျိုးသောဘာသာရပ်များနှင့်စာသင်ခန်းများကိုဤအင်္ဂါရပ်၏အကူအညီဖြင့်၎င်းတို့ခွဲဝေရန်လိုအပ်မှုအရသတ်မှတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ကျောင်းသားများ၏ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်စေမည့်ကွဲပြားခြားနားသောလက်တွေ့ကျသောသီအိုရီအတန်းများကိုလည်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။
လုံလောက်သောအချိန်နှင့်အုပ်ချုပ်ရေး၏အားထုတ်မှုကိုကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက်; ပါရမီရှင် ပေါ်တယ်သည်ကျောင်းအချိန်ဇယားကိုအခမဲ့ဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ ဤအင်္ဂါရပ်အားဖြင့်ကျောင်းများ / ကောလိပ်များ / အင်စတီကျူးရှင်းများ / တက္ကသိုလ်များသည် ၀ န်ထမ်းများအချိန်ဇယားနှင့်ကျောင်းသားအချိန်ဇယား၊ သက်ဆိုင်ရာဆရာမရှိသည့်အချိန်တွင်အခြားဆရာတစ် ဦး အားဟောပြောပို့ချခြင်းဖြင့် proxy ကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်ကူညီသည်။
တစ်ချိန်ကကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးသည်အတန်းတစ်ခုအတွက်အချိန်ဇယားကိုဝန်ခံခဲ့သည်။ ဆရာများအနေဖြင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စာသင်ချိန်ဇယားကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီးအချိန်ဇယားအတိုင်းစီမံနိုင်သည်။ ဆရာများကသူတို့၏အစီအစဉ်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ မိုဘိုင်း app မှလည်းအချိန်ဇယားကိုကြည့်နိုင်သည်။ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှသတ်မှတ်ထားသော proxy များကိုမိုဘိုင်း application မှအသိပေးလိမ့်မည်။
ကျောင်းသူ / သားကျောင်းသားအချိန်ဇယား
သက်ဆိုင်ရာအတန်းတစ်ခုစီအတွက်ဆရာများဖန်တီးထားသောအချိန်ဇယားကိုကျောင်းသားများအား၎င်းတို့၏မိုဘိုင်း app မှကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ကျောင်းသားများသည်ဆရာ ၀ န်မှကြားခံများအနေဖြင့်ပြောင်းလဲမှုများနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများအကြောင်းကြားစာကိုတောင်ရရှိလိမ့်မည်။ မိဘများအနေဖြင့်လည်းကျောင်းသား၏အချိန်ဇယားကိုကြည့်ရှုနိုင်ပြီး၎င်းသည်ကျောင်းသား - မိဘအက်ပ်အတွက်အပတ်စဉ်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
အချိန်ဇယားစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆော့ဝဲလ်မြန်မာ၊ အချိန်ဇယားစီမံခန့်ခွဲမှု ERP Myanmar၊ ကျောင်းကောလိပ်တက္ကသိုလ်အတွက်အချိန်ဇယားစီမံခန့်ခွဲမှုလျှောက်လွှာ၊ မြန်မာကျောင်းသားများအတွက်အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း၊ Timetable Generator ၏မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းသည်မြန်မာနိုင်ငံကောလိပ်တက္ကသိုလ်၊ iPhone နှင့် Android အတွက်ကျောင်းသားအချိန်ဇယားစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီ အသိပေးချက် စနစ် ဆော့ဝဲ
ကျောင်းလခစီမံခန့်ခွဲမှုမြန်မာ ကောလိပ် | အင်စတီကျု | တက္ကသိုလ်
လုပ်ခလစာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည် ၀ န်ထမ်းများ၏လစာ၊ စရိတ်၊ နှုတ်ယူခြင်း၊ စုစုပေါင်းနှင့်အသားတင်လစာ၏ဘဏ္divisionာရေးဌာနကိုကြည့်ရှုစီမံသည်။ ၎င်းသည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွက် ကျေးဇူးပါ ဖန်တီးခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုသည်။ Payroll Management System ၏ထူးခြားသောအားသာချက်မှာ၎င်း၏ရိုးရှင်းသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသော interface ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလစာ မှပြုလုပ်သောစစ်တမ်းအရဖော်ပြသည့်အတိုင်းအဖွဲ့အစည်း၏ ၇၀% ခန့်သည်၎င်းတို့အသင်းအဖွဲ့တွင်လစာစီမံခန့်ခွဲမှုကိုအသုံးပြုကြကြောင်း၊ ၎င်းတို့သည်ခန့်မှန်း။ မရသောလခများနှင့်ထိပ်တန်းအာဏာပိုင်များထံမှအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းတို့၏ဖြစ်နိုင်ခြေများကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်။
ကျောင်းကောလိပ်တက္ကသိုလ်စနစ်လစာဝန်ဆောင်မှုများမြန်မာနိုင်ငံ, အွန်လိုင်းလုပ်ခလစာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် ဆော့ဝဲ ERP မြန်မာ, လုပ်ခလစာစီမံခန့်ခွဲမှု မိုဘိုင်းလျှောက်လွှာ မြန်မာ , မြန်မာနိုင်ငံကောလိပ်ကောလိပ်တက္ကသိုလ်အတွက်လစာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် , မြန်မာနိုင်ငံကောလိပ်ကျောင်းအတွက်လစာစီမံခန့်ခွဲမှုလျှောက်လွှာ, ကျောင်းလခစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် Modules မြန်မာနိုင်ငံ
ကျောင်းဘဏ္Financeာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမြန်မာနိုင်ငံ | ကောလိပ် | အင်စတီကျု | တက္ကသိုလ်
ပါရမီရှင် ဘဏ္စီမံခန့်ခွဲမှုာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းသည်ပညာရေးကဏ္forအတွက်အထူးဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီးကျောင်း၊ ကောလိပ်ဘဏ္Financeာရေး၏အလုံးစုံပြည့်စုံသောအကြမ်းဖျင်းဖော်ပြမှုကိုအင်စတီကျုအားပေးသောတိကျသောကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များကိုတိကျသောလယ်ဂျာဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အလွယ်တကူသုံးစွဲနိုင်သောမျက်နှာပြင်ရှိသည့်လယ်ဂျာထည့်သွင်းမှုများပြုလုပ်ရန်၊ အမှားကင်းပြီးမြန်ဆန်တယ်။ မှတ်တမ်းတင်ထားသောအခကြေးငွေများကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ချက်ခြင်းရည်ညွှန်းသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ထူထောင်ထားသောဌာနတစ်ခုလုံးတွင်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးပါ ၀ င်သည့်စာရင်းအင်းနှင့်ဘဏ္reportingာရေးအစီရင်ခံခြင်း၏ရှုပ်ထွေးမှုများကိုထိရောက်စွာစီမံသည်။
ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်အပြိုင်အဆိုင်အခြေအနေတစ်ခုတွင်သင့်လျော်သောဘဏ္dataာရေးအချက်အလက်နှင့်ရှင်သန်မှုမဟာဗျူဟာများရှိရန်လိုအပ်သည်။ သိသာထင်ရှားသည့်အောင်မြင်မှုသည်ဘဏ္informationာရေးအချက်အလက်များကိုအမှန်တကယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိစုဆောင်းအသုံးချနိုင်စွမ်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးသောအဖွဲ့အစည်းများတွင်လိုအပ်သောဘဏ္informationာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များမှန်ကန်စွာဖော်ပြထားသည်။ အချို့သောစံချိန်စံညွှန်းများ၊ ဥပဒေများနှင့်နည်းလမ်းများကိုပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွင်ဘဏ္financialာရေးဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဖြင့်ကောင်းစွာသတ်မှတ်ထားသည်။
ဘဏ္စီမံခန့်ခွဲမှုာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မြန်မာနိုင်ငံ, ဘဏ္ာရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ဆော့ဝဲ မြန်မာ, ဘဏ္ာရေး စီမံခန့်ခွဲမှု မိုဘိုင်းလျှောက်လွှာ မြန်မာ, ကျောင်းဘဏ္ဘဏ္ာရေးာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ, ဘဏ္Collegeာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကျောင်းကောလိပ်တက္ကသိုလ်အင်စတီကျုအတွက်မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း မြန်မာ, ကျောင်း ဘဏ္ာရေး စီမံခန့်ခွဲမှု iPhone နှင့် Android မြန်မာ အတွက်အက်ပလီကေးရှင်း, မြန်မာနိုင်ငံကောလိပ်ကျောင်းတက္ကသိုလ်အတွက်ဘဏ္စီမံခန့်ခွဲမှုာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်
ကျောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စာကြည့်တိုက်၊ ကောလိပ် | တက္ကသိုလ်
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသည်ကျောင်း / ကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ်တို့တွင်အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်နှင့်ယာဉ်မောင်းတယ်လီဖုန်းကဲ့သို့သောကျောင်းယာဉ်ယာဉ်မောင်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအုပ်ချုပ်သူမှကြည့်ရှုနိုင်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်း၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်သည်၎င်းသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်ခွဲဝေမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အပြည့်အစုံဆန်းစစ်ခြင်းကိုပေးလိမ့်မည်။ GPS စနစ်၏အကူအညီဖြင့် ပါရမီရှင် သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကျောင်းမော်တော်ယာဉ်၏တိုက်ရိုက်နေရာမှန်ကိုခြေရာခံနိုင်သည်။ အလားတူပင်၊ ဤသင်ရိုးကိုသီးခြားဌာနတစ်ခု၏လိုအပ်ချက်အရလည်းပြုပြင်နိုင်သည်။
စာကြည့်တိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆိုသည်မှာစာကြည့်တိုက်တစ်ခု၏စာရင်းကိုစီမံရန်အသုံးပြုသည်။ ဤသည်စာကြည့်တိုက်တွင်ရရှိနိုင်စာအုပ်များ၏ငွေပေးငွေယူတစ်ခုလုံး၏မှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်။ စာကြည့်တိုက်မှူး၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးစာကြည့်တိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကို ပါရမီရှင် ကထောက်ပံ့ပေးသည်။ စာကြည့်တိုက်မှရရှိနိုင်သည့်စာအုပ်များ၏မှတ်တမ်းများနှင့်ထုတ်ဝေသောစာအုပ်များကိုခြေရာခံရန်ကူညီပေးသောလုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။ ဒီစနစ်ကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများတွင်ရနိုင်သည်။
စာအုပ်အသစ်များကို ၀ င်ရောက်ရန်ပညာရှိပြီးလွယ်ကူသောဘာသာရပ်စာအုပ်များကိုသတ်မှတ်ပါ။
ထွက်ခွာသည် နှင့် ရောက်ရှိကြောင်းစာရင်းသွင်းခြင်း လုပ်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်း။
ကျောင်းသားတစ် ဦး အားမည်မျှစာအုပ်များထုတ်ဝေသည်နှင့်စာအုပ်၏အခြေအနေကိုသိရှိရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဘော်ဒါဆောင် စီမံခန့်ခွဲမှု module ကို ဘော်ဒါဆောင် ၏အမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုစီမံခန့်ခွဲရန်တည်ဆောက်ထားသည်။ ကျောင်းသားအမြောက်အမြားရှိပါကနှင့် ဘော်ဒါဆောင် လုပ်ငန်းများနှင့်မှတ်တမ်းများကိုချိန်ညှိရန်လိုအပ်ပါကနေ့စဉ် ဘော်ဒါဆောင် လုပ်ဆောင်မှုများကိုကိုင်တွယ်ရန် ဘော်ဒါဆောင် စီမံခန့်ခွဲမှုသည်ထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူများသည်အသေးစိတ် မီနူး မှတစ်ဆင့် ဘော်ဒါဆောင် နေရာထိုင်ခင်းနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ပါရမီရှင် ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု၏အကူအညီဖြင့်အသုံးပြုသူများသည်နေ့စဉ်သုံး canteen menu ကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် မိုဘိုင်းလျှောက်လွှာ မှတဆင့်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
ကျောင်းသားများဘတ်စ်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆော့ဝဲလ်မြန်မာ၊ ကျောင်းသားများဘတ်စ်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြေများမြန်မာ၊ ကျောင်းဘတ်စ်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ၊ ကျောင်းသားဘတ်စ်ကားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်း iPhone၊ စာကြည့်တိုက်စီမံခန့်ခွဲမှု မိုဘိုင်းလျှောက်လွှာ မြန်မာ၊ မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် ဘော်ဒါဆောင် ဘွတ်ကင် မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်း၊ မြန်မာကျောင်းသားများအတွက် ဘော်ဒါဆောင် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆော့ဝဲ၊ အွန်လိုင်းဘော်ဒါဆောင်ကြိုတင်မှာကြားမှု ဆော့ဝဲ လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မိုဘိုင်း App မြန်မာ
ကျောင်းသူ / ကျောင်းသားနှင့်ယာဉ်များကိုခြေရာခံ / စနစ်မြန်မာ ကောလိပ် | အင်စတီကျု | တက္ကသိုလ်
အထူးသဖြင့်ကျောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းကိုခြေရာခံရန်နှင့်ကျောင်းသားများတည်နေရာကိုလုံခြုံသောနည်းလမ်းဖြင့်ကိုင်တွယ်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ကျောင်းသားသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်ပေါ်သို့တက်ခြင်းရှိမရှိသိရန်နှင့်ကျောင်းများမှအချက်အလက်များနှင့်အတူအုပ်ထိန်းသူများနှင့်ကျောင်းစီမံခန့်ခွဲသူများအားအရေးကြီးသောသတိပေးချက်များပေးပို့ရန်လုံလောက်သည် သိရန်လိုအပ်သည် နောက်ပိုင်းတွင် ပါရမီရှင် ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကတိကျမှန်ကန်ပြီးလျင်မြန်သောအဖြေများပေးသည်။ ကျောင်းသား ထွန်း သည်မိုဘိုင်းကိရိယာကိုတိုက်ရိုက်ကျောင်းသားခြေရာခံရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဆရာများနှင့်မိဘများသည် ပါရမီရှင် Cross Platform မှတဆင့်အချိန်နှင့်တပြေးညီစောင့်ကြည့်နိုင်သည်။ ကျောင်းတစ်ခု၏ကျောင်းသားများအားစောင့်ကြည့်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ပါရမီရှင် သည်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ရည်ရွယ်သည့် GPS ဖြေရှင်းချက်ခြေရာခံ ကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ကျောင်းသား၏လုံခြုံရေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက်တာဝန်ယူခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ ၎င်းသည်မော်တော်ယာဉ်များကိုခြေရာခံရုံသာမကကျောင်းသားတစ် ဦး ချင်းစီကိုပါခြေရာခံရန်ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည်ကျောင်းနှင့်ကောလိပ်စီမံခန့်ခွဲမှုများကို၎င်းတို့၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပိုမိုထိရောက်စွာဆက်ဆံရန်နှင့်မိဘများအားပိုမိုကောင်းမွန်သောတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုပေးစွမ်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကျောင်းသားဘတ်စ်ကားခြေရာခံစနစ် လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ၊ ကျောင်းသားဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းများ လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ၊ ကျောင်းသားဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်းခြေရာခံခြင်းမိုဘိုင်း App မြန်မာ iPhone ယာဉ်နှင့် iPhone အတွက် Android App မိုဘိုင်းခြေရာကောက် App၊ ကျောင်းဘတ်စ်ကား GPS ခြေရာခံ မိုဘိုင်း App မြန်မာ၊ , ကျောင်းဘတ်စ်ကားလမ်းကြောင်း အကောင်းမြင် မြန်မာ
ကျောင်းစာမေးပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုမြန်မာ ကောလိပ် | အင်စတီကျု | တက္ကသိုလ်
ကျောင်းစာမေးပွဲစီမံခန့်ခွဲမှု Module တွင်စာမေးပွဲလုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်လွယ်ကူလာသည်။ ကျောင်း လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း ၏စာမေးပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းသည်မတူညီသောအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုစစ်ဆေးသည်။ ဒီစနစ်သည်စာမေးပွဲရလဒ်များကိုပုံစံသုံးမျိုးဖြင့်ရနိုင်သည် - အဆင့်အခြေ၊ အမှတ်အသားများနှင့်နှစ်မျိုးလုံးပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကဏ္ အမျိုးမျိုးသော အမျိုးမျိုး၊ ဘာသာရပ်များ၊ ဘာသာစကားအမျိုးအစားများနှင့်စာမေးပွဲအမျိုးအစားများကဲ့သို့သောကဏ္configurationများစွာအတွက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုကူညီလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူအဆင့်နှင့်စာမေးပွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ကျောင်း လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း တိမ်တိုက်သည်ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများကိုပေးသောကြောင့်စာမေးပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံတွင်လူ့အမှားအယွင်းများရှိနိုင်ခြေနည်းသည်။
စာမေးပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုသည်စာမေးပွဲအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်အွန်လိုင်း / အော့ဖ်လိုင်းစာမေးပွဲစာရွက်စာတမ်းများ၊ မေးခွန်းများမေးသည့်မေးခွန်းများ၊ စာမေးပွဲအချိန်ဇယားနှင့်စာမေးပွဲရလဒ်များကိုဆရာများအားကူညီမည့်အလားအလာရှိသောကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တက္ကသိုလ်များသည်အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းစာမေးပွဲများကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးအမှတ်များသို့မဟုတ်တန်းအခြေခံစာမေးပွဲများကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပါရမီရှင်ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည်သင်ကြားရေးပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့်တစ်ခုတည်းသောပလက်ဖောင်းပေါ်မှအသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုပေးသည်။
စာမေးပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆော့ဝဲလ်မြန်မာ၊ ကျောင်းသားစာမေးပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆော့ဝဲလ် လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ၊ ကျောင်းသားစာမေးပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုမိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်း၊ စာမေးပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆော့ဝဲ လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ၊ အွန်လိုင်းစာမေးပွဲစီမံခန့်ခွဲမှုမိုဘိုင်းလျှောက်လွှာမြန်မာ၊ မြန်မာ
ပါရမီရှင်ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သောနိုင်ငံတကာနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုဖြင့်ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသည်ခိုင်မာသည့်အင်္ဂါရပ်များ၊ ၎င်းသည်အသေးစားနှင့်ကြီးမားသောအဖွဲ့အစည်းများ၏လိုအပ်ချက်များအတွက်လုံးဝသင့်လျော်သည် အမျိုးမျိုးသော Key အင်္ဂါရပ်များ; အွန်လိုင်း ၀ င်ခွင့် / စာရင်းသွင်းခြင်း၊ အွန်လိုင်းအခကြေးငွေပေးချေခြင်း၊ အွန်လိုင်း / အော့ဖ်လိုင်းစာမေးပွဲစီမံခန့်ခွဲမှု၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ကျောင်းသား / ယာဉ်တိုက်ရိုက်ခြေရာခံခြင်း၊
သင်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် သင်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် မြန်မာ , အခမဲ့ကျောင်းသင်ကြားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဆော့ဝဲလ်မြန်မာ, အွန်လိုင်းသင်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း မြန်မာ, အွန်လိုင်းသင်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲမှုမိုဘိုင်းလျှောက်လွှာမြန်မာ , မြန်မာနိုင်ငံကောလိပ်ကျောင်းအတွက်သင်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, အွန်လိုင်းသင်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်မြန်မာ ,အွန်လိုင်းသင်ယူမှု App မြန်မာ , သင်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် စနစ်ဆော့ဝဲလ်မြန်မာ , သင်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် မိုဘိုင်းလျှောက်လွှာမြန်မာ, သင်ယူမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် စနစ် ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် မြန်မာ, ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် အွန်လိုင်းအတန်းအစားခန်းမြန်မာ